Nhau - Yese gasi nzira manotsi
1. Nezve mhando dzemvura
Kushandiswa kwemvura kushandisa yakamanikidzwa mweya, iko kushandiswa kweimwe mvura yemuchiitiko kunofanirwa kusimbiswa nekambani.
2. Condensate mvura mamiriro
Iyo yakadzvanywa mweya ine mvura yakanyoroveswa ndiyo ichave chikonzero chekusashanda kwezvikamu zvemweya. Pamberi pefaera, maoma mweya, macompensate misungo inofanira kuiswa.
3. Condensate abudise manejimendi
Kana condensate ikangokanganwa kuburitsa firita yemhepo, iyo condensate inoyerera ichibuda mumativi maviri, zvichikonzera kusashanda kwezvikamu zvemweya. Condensate buditsa manejimendi ine nguva dzakaoma, zvinokurudzirwa kushandisa firita ne otomatiki drainage.
4. Pamusoro pemhando dzemhepo
Yakadzvanywa mweya ine makemikari, ekugadzira mafuta ane manyoro anogadziriswa, munyu, anoparadza magasi, nezvimwewo, chichava chikonzero chekuparadza uye chakaipa chiito, kwete kushandisa.
5. Mhepo firita inofanira kuiswa
Pedyo nerutivi rwekumusoro rwevhavha, iyo firita inofanirwa kuiswa kwechokwadi chemamirimita mashanu anotevera firita yemhepo.
6. Mushure mekumisa iyo inotonhorera, mhepo yekuomesa uye condenser mvura yekuunganidza, etc.
Yakatsindirwa mweya ine huwandu hwakawanda hwemvura yakanyoroveswa, inotungamira kune iyo vharuvhu uye zvimwe zvinhu zvepneumatic zveyakaipa chiito, saka gasi sosi sisitimu inofanira kumisikidzwa mushure meinotonhorera, yekuomesa mweya uye yakaunganidzwa mvura muteresi, nezvimwe.
7. Toner uye dzimwe nguva munzvimbo yekumusoro yevhavha, inofanirwa kuseta iyo mhute yekuparadzanisa mafuta
Kana iyo toner inogadzirwa nemhepo compressor, yakanamatira kune vharafu, iyo vharuvhu inokonzeresa kuita kwakashata.
Yakadzama zvinodiwa zvehunhu hwemhepo yakamanikidzwa, ona iyo kambani "yakamanikidzwa mweya yekuchenesa system".
8. Kukanganiswa kwemvura yakadzivirirwa
Mvura yakanyoroveswa mumhepo firita inofanira kugara ichiburitswa.
Elastic yekuisa chisimbiso snonoid vharafu, kana iwo mafuta chete, iwo mafuta anofanira kunge achienderera.
Turbine Nha. 1 (hapana chinowedzera) VG32 ISO inofanira kushandiswa. Pamusoro pekuzora mafuta, zvinokonzeresa kushanda zvakanaka kwevhavha, nezvimwe.
10. Kuraswa kwepombi
Piping isati yakazara yakazara kana yakashambidzwa mambure pombi magumo ekucheka, kucheka mafuta kana guruva nezvimwe.
11. Nzira yekutenderera yekuisa chisimbiso tepi
Pipe uye pombi yemubatanidzwa inguva yeiyo yakamisikidzwa kubatana, usabvumidze iyo yakanaka upfu pombi tambo uye yekuisa chisimbiso bhandi remarara akasanganiswa nepombi yemukati. Kana tepi yekuisa chisimbiso ichishandiswa, yekumberi kwekupedzisira kwetambo yekumusoro inofanirwa kuiswa padivi ne1 tambo mapango kwete kuputira yakatenderedza tepi yekuisa chisimbiso.
12. Usashandise mumagasi anoparadza, makemikari, mvura, mvura, nharaunda yemhute yemvura kana nzvimbo dzine zvinhu zviri pamusoro.
13. Dzivirira chimiro chinoenderana neIP65 uye IP67 (zvichibva paIEC60529) zvigadzirwa, (guruva nemvura) paguruva uye mvura inogona kudzivirirwa. Asi haigone kushandiswa mumvura, inofanirwa kutarisisa.
14. Inoenderana neIP65 uye IP67 zvigadzirwa, iyo yekumisikidza inofanirwa kuve yakakodzera kusangana nematanho avo, zvakakosha kuti uverenge zvinyorwa zvechigadzirwa chimwe nechimwe.
15. Inopisa gasi, inoputika gasi mhepo, usashandise, kuitira kudzivirira kuitika kwemoto uye kuputika. Ichi chigadzirwa hachina anti kuputika chimiro.
16. Usashandise munzvimbo yekudengenyeka uye kuvhunduka.
17. Nzvimbo inovhenekwa nezuva, inofanira kuwedzera chifukidziro chekudzivirira, kufukidza zuva.
18. Kune nzvimbo dzakakomberedza sosi yekupisa, kupisa kupisa kunofanira kumira.
19. Panenge paine mafuta kana marambi emoto uye dzimwe nzvimbo dzekubatanidza, matanho akakodzera ekudzivirira anofanirwa kutorwa.
20. Solenoid vharuvhu yakaiswa mukabhodhi yekudzora, nguva yakareba pasimba pechiitiko, inofanirwa kutora matanho ekupisa kuona kuti vharuvhu ye solenoid iri munzvimbo yekushisa yakabvumidzwa.
Kugadziriswa uye kuongorora kunoitwa kunoenderana nemaitiro ebhuku rekurayira.
Kana ikangoshandiswa, inokonzeresa kukuvara, kukuvara, kana kukuvara kune vashandi.
22. Izvo zvikamu zvekuburitsa uye zvakamanikidzwa mweya kune iyo yekuzadza
Mukusimbiswa nekutyaira chinhu chakaitwa kudzivirira kuraswa uye kudzivirira kuraswa kweanotiza, kudimbura gasi kupa uye magetsi, pneumatic system yemukati zvisaririra zvemhepo yakamanikidzwa kuburikidza neakasara kumanikidza kuburitsa mashandiro anga achibvisa, ku buritsa zvinhu zvacho. Uye zvakare, matatu ari pakati pechisimbiso kana kuturika vharuvhu yerudzi, vharafu uye humburumbira pakati pemhepo yakasara yakamanikidzwa inofanira kudururwa.
Mushure mekumisikidzwa kana kuiswazve kwezvikamu, yekutanga kusimbisa iyo pneumatic actuator uye zvichingodaro zvakaitwa kudzivirira kuraswa nekukurumidza kwekurasa, uye wozosimbisa iko kwakajairika mashandiro ezvinhu.
23. Low frequency kushandisa
Kuti udzivise kufamba kwevhavha kwakaipa, vharafu inofanirwa kunge iri mumazuva makumi matatu kuti iite shanduko kamwe, ndapota teerera kune mhando yemhepo yekupa.
24. Kushanda kwemaoko
Nemaoko mashandiro, chishandiso chinofanirwa kuve chakabatana nezviito, uyezve wosimbisa iyo yakachengeteka mashandiro.